Uyihlaziya njani iYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 371
I-YouTube iyaqhubeka nokulawula intengiso ngokwamaqonga akwi-intanethi wokubukela kunye nokwabelana ngeevidiyo. Ukusuka naphina emhlabeni singangena kweli phepha kwaye sonwabele inani elikhulu leevidiyo ezigcinwe kwiwebhu, nangona kunjalo ukuze ube nakho okungcono kubalulekile ukuba isicelo sihlaziywe.
Ukuba awukayihlaziyi iYouTube kwaye ufuna ukufunda ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho Siza kukufundisa amanye amaqhinga okuhlaziya eli qonga levidiyo lidumileyo. Ukuhlaziywa kweYouTube kuya kukuvumela ukuba uzonwabele zonke izibonelelo ngaphandle kokuphazamiseka.
Ungayihlaziya njani i-YouTube kwi-Android
Uninzi lwabasebenzisi beYouTube bahlala befikelela eqongeni ngezixhobo zabo eziphathwayo ngokusetyenziswa ngokusemthethweni kwenkampani. Esi sicelo simahla simahla sokukhuphela kwaye masigcinwe sinolwazi ngalo lonke ixesha.
Si ufuna ukuvuselela usetyenziso lwe-YouTube kwi-Android Kuya kufuneka ulandele la manyathelo alula:
Vula Ivenkile esemthethweni ye-Android (iVenkile yokudlala)
Kwibha yokukhangela chwetheza igama "Youtube"
Khetha iapp esemthethweni (iya kubonakala njengokhetho lokuqala)
Akukho sidingo sokwenza oko instalar isicelo kuba sele unayo kwiselfowuni. Into ekufuneka uyenzile kukujonga ukuba ngaba i-app ihlaziyiwe
Cofa kwiqhosha "Uhlaziyo”Kwimeko apho uhlaziyo lwesicelo lukhona.
Yamkela imigaqo kwaye ucofe ku "ukwamukela"
Espera ukukhuphela uhlaziyo olutsha kwaye kunjalo. Uya kuba ne-YouTube ehlaziyiweyo kwiselfowuni yakho
Hlaziya i-YouTube kwi-iOS ye-Iphone
Ukuba unesixhobo se-iOS kwaye ufuna ukuhlaziya usetyenziso lwe-YouTube Ungayenza ngokukhawuleza nangokulula. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Vula Ivenkile yosetyenziso kwisixhobo sakho
Khangela Youtube phakathi kweapps ozifakileyo kwisixhobo
Ngaba uyalibona iqhosha elithi "Uhlaziyo"? Ke oko kuthetha ukuba kukho ingxelo entsha yeapp kwaye kufuneka uyifake.
Cofa ku- “Uhlaziyo”Kwaye linda uhlaziyo olukhoyo lokukhuphela.
Emva kokuba inkqubo igqityiwe kufuneka qalisa ngokutsha isixhobo sohlaziyo ukuze sisebenze.
Ungayihlaziya njani iYouTube kuhlobo lwayo lwePC
Unamathuba okuba hlaziya i-YouTube kuhlobo lwayo lwePC, Enye yeendlela abasebenzisi abazisebenzisa kakhulu ukufikelela kuleqonga levidiyo kwi-intanethi. Ukuba ufuna ukufunda indlela yokufaka uhlaziyo, simema ukuba ulandele la manyathelo:
cofa LAPHA ukufikelela kwiwebhusayithi esemthethweni yeYouTube
Kulo Icala lasekhohlo lesikrini Iinketho ezininzi ezinxulumene noseto lweakhawunti yakho ziya kuvela.
Kuya kufuneka ubeke apho ithi "Zama amanqaku amatsha”Kwaye ucofe apho
Ngalo ndlela Uyakwazi ukufikelela kwiinguqulelo ezintsha ezinikezelwa yiYouTube yePC
Cofa kwiqhosha "Zama inguqulelo entsha ye-YouTube"
Iqonga liza kuchaza kancinci malunga nokuba le nguqulo intsha imalunga kwaye iya kukunika ukhetho lokucofa "Yizame ngoku”Kwimeko apho ufuna ukuzama uhlaziyo olutsha.
1 Ungayihlaziya njani i-YouTube kwi-Android
2 Hlaziya i-YouTube kwi-iOS ye-Iphone
3 Ungayihlaziya njani iYouTube kuhlobo lwayo lwePC